दिनेश गौतम काठमाडौं, १५ जेठ
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड बजेट छुट्याएको छ । प्रतिशतको हिसाबले कुल बजेटको ११.६४ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड बजेट छुट्याइएको थियो । अर्थात १०. ६७ प्रतिशत ।
विज्ञहरूले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । तर, अहिले पनि २० प्रतिशत पुग्न सकेन । बजेट अपुरो, अपूर्ण र अमुर्त ढंगबाट आएको विज्ञहरूले प्रतिक्रया दिएका छन् ।
‘गत वर्ष पूर्वाधार विकासको पैसा पूर्वाधार निर्माणमा राखिएको थियो । अहिले शिक्षामा नै समावेश गरिएकोे छ,’ शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले भने, ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार र सवलीकरणमा बढेको देखिन्छ । सबैलाई खाजा दिने र स्यानेटरी प्याडले बढेको देखिएको हो ।’
उच्च शिक्षा र छात्रवृत्तिमा बजेट घटेको उनले बताए ।
‘उच्च शिक्षा र छात्रवृत्तिमा घटेको छ,’ उनले भने, बालविकासको शिक्षक र विद्यायका कर्मचारीको तलब बढेन । उनीहरू थोरै तलबमा काम गरिरहेका छन् ।’
संघीय सरकारले जति खर्च गर्छ प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि त्यति नै खर्च गर्ने हो भने शिक्षाको सुधार गर्न सकिने उनले बताए ।
अनलाइन शिक्षा बजेटमा आउनु सकारात्मक भएको उनले बताए । ‘अनलाइन शिक्षा समयको माग हो,’ उनले भने, ‘यो सकारात्मक छ ।’
शिक्षामा १ खर्ब ७१ अर्ब बजेट, के–के कार्यक्रम परे ?
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब नबढेकोमा आपत्ति जनाए ।
‘विद्यालय कर्मचारी र प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षक ६ हजारमा काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अघिल्लो वर्ष पनि बढेन । अहिले पनि बढेन । अब वातावरण सहज भएपछि आन्दोलनमा जान्छौं ।’
तलब बढाउन मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए ।
‘आधारभूत तहमा काम गर्ने ३० हजार शिक्षक र १५ हजार कर्मचारी छन् । उनीहरु निराश छन्,’ उनले भने । अनलाइन शिक्षाको कुरा आएपनि यो ब्यापारिक तबरबाट आएको उनले आरोप लगाए ।
‘अनलाइनका लागि पनि पैसा तिर्नु पर्ने हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘३५ हजार ५५ विद्यालय छन् । सबैका डाटा सेन्टर राख्न भन्यौं । त्यो कुरा पनि आएन ।’
स्वयंसेवक शिक्षक राख्ने कुरा घातक हुने उनले बताए । ‘शिक्षक तालिमप्राप्त लाइसेन्स भएको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘काचो शिक्षक विद्यालयमापठाउन खोजियो । यो घातक हो बजेट अपुरो, अपूर्ण र अमूर्त ढंगबाट आएको छ ।’
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ १५, २०७७, २०:५२:००
निजी विद्यालयले सरकारलाई बुझाए अवधारणा
कोरोनाको उच्च जोखिममा उपत्यका
३ निजी प्रयोगशालाले पाए कोरोना परीक्षणको अनुमति